Inuka phu inkohlakalo kowezemfundo eKZN | News24
Inuka phu inkohlakalo kowezemfundo eKZN
Durban - Inuka phuhlu inkohlakalo yokutamuzwa kwamathenda emahhovisi oMnyango wezeMfundo eTruro House eThekwini, okubalwa nezikhulu ezingaphakathi kula mahhovisi.
Izisebenzi ezikhathazekile - esezikhathele wukubuka le nkohlakalo - zibhalele uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Mthandeni Dlungwane zicela ukuba angelelele ukuqeda le nkohlakalo esinesikhathi eside yenzeka.
ILANGA lithole incwadi ebhalelwe ungqongqoshe enemininingwane eveza ukusuka nokuhlala mayelana nokutamuzwa kwamathenda ngabathile. Le ncwadi iveza ukuthi kunosomabhizinisi womdabu waseNdiya - ILANGA elinalo igama lakhe - ohlangene nezikhulu ezisebenza kula mahhovisi ukwenza le nkohlakalo, phakathi kwazo okukhona nabaqondisi bezemfundo ezifundeni ezimbili ILANGA elinawo amagama abo kodwa eliwagodlile kuze kuphothulwe uphenyo.
Kuthiwa lezi zikhulu zifunjathiswa yilo somabhizini intshontsho ngokuthola kwakhe inqwaba yamathenda anikwa izinkampani zakhe eziyinqwaba kodwa okuthiwa eziphethwe yizichuse.
Yonke imali ekhokhelwa lezi zinkampani kubikwa ukuthi ingena ephaketheni lalo somabhizinisi. Le ncwadi iveza ukuthi lo somabhizini uyazenzela emahhovisi akwaSupply Chain Manangement (SCM) eTruro, sekufana nehhovisi lakhe ungena azenzele umathanda azithintele emakhompyutheni ezisebenzi zomnyango.
Kuthiwa nguyena obona kuqala ukuthi yimiphi imisebenzi ezophuma futhi izomkhokhela imali engakanani. ILANGA lithole ukuthi iningi lamathenda azitamuzela kuwona, kuba yilawo angakhangiswa emaphephandabeni esamba esingaphansi kuka-R300 000.
Kuthiwa uthumela ama-qoutation amathathu, kuwona usuke esazi ukuthi iyiphi inkamapni ezothola umsebenzi. ILANGA likhulume nomthombo walo ongaphakathi kula mahhovisi oveze ukuthi sekunesikhathi le nkohlakalo iqhubeka.
Uthi okwenza kube nzima ukuba inqandeke wukuthi lo somabhizinisi ufukanyelwe yizikhulu.
OLUNYE UDABA: Kunyanye abe-ANC abe-SABC beduba ePhalamende
"Ungafunga ukuthi usebenza eTruro, ungena emahhovisi akwa-SCM ahlale phambi kwekhompyutha yezisebenzi azenzele akuthandayo. Izisebenzi ziyasaba ukukhuluma indaba yakhe ngoba kuyaziwa ukuthi uhlangene nabaphathi. Akekho ongazi ukuthi zonke lezi zinkampani ezihlale zithola imisebenzi eThekwini nakwiLembe ngezalo somabhizinisi," kuchaza lo mthombo.
Umthombo uphinde waveza ukuthi iningi labantu abavela njengabanikazi balezi zinkampani adla ngazo amathenda, yizisebenzi zakhe, usebenzisa omazisi bazo ukuvula inkampani. Ezinye zalezi zisebenzi kuthiwa zisuke zingazi ukuthi kuvulwe izinkampani ngazo.
ILANGA lishayele uNgqongqoshe Dlungwane, othe: "Ngiyayazi nami leyo ncwadi isifikile ezandleni zami. Ziningi izincwadi esizitholile kayiyodwa, zonke ziveza inkohlakalo eqhubekayo ngaphakathi. Siphezu kwalo lolo daba kukhona esesiqalile ukukwenza ngophenyo ngenkohlakalo esibikelwe ngayo."
Uthe uphenyo luzophothulwa kube khona abajezayo ngale mikhuba.
"Sizolwa nayo inkohlakalo njengoba kubikwa kwabezindaba. Uma sesitholile ngento engalungile siyayisukumela. Abantu mabaqhubeke basivezele izinto ezingalungile eziqhubekayo emnyangweni wethu ukuze sizozisukumela," kubeka uMnu Dlungwane.
UMnu Dlungwane ukhuluma kanjena nje, ILANGA lihabule ukuthi lo mkhuhlane mdala kakhulu njengoba ubuvele ukhona ngesikhathi engakabi ngungqongqoshe.